Hitombo ny velaran-tany voatondraka ao Ambositra – Ministère de l'Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche
Hitombo ny velaran-tany voatondraka ao Ambositra
Manatanteraka ny velirano faha sivy dia ny fahavitan-tena ara-tsakafon’ny Malagasy, indrindra fa ny fahavitan-tena ara-bary amin’ny taona 2020, ny Minisiteran’ny fambolena, fiompiana ary ny jono. Vaindohan-draharaha amin’izany ny fanajariana ny lemaka voatondraka izay tanterahin’ny fandaharan’asa DEFIS mijoro eo anivon’ny Ministera. Ny iray amin’ireo lemaka miisa folo mahery izay hohajariana manomboka ny volana septambra izao no notsidihan’ny mpandrindra nasionaly RANDRIANARITIANA Pierrot Serge ny 26 jolay teo.
Vokabary 450 taonina no andrasana
Velaran-tany mirefy 150 ha no heverina fa ho voatondraka rehefa vita ny asa fanamboarana lalan-drano mirefy 4,7 km sy ireo toha-drano anankiroa dia Andohariana sy Analalehibe (kaominina Ilaka Centre, distrika Ambositra, faritra Amoron’i Mania) raha 80 Ha izany ankehitriny. Voka-bary 5t/ha fara fahakeliny no tanjona amin’ny fanamboarana ireo toha-drano anankiroa ireo. Ny fikambanan’ny mpampiasa rano FIRAISANTSOA no mpahazo tombontsoa amin’izany izay ahitana tokantrano miisa 174 eo ho eo.
Fandaharan’asa saha sekoly
Aorinan’ny fanajariana ny foto-drafitrasa dia hisy ihany koa ny fanofanana ireo mpamboly ireo amin’ny fambolena vary ka ahafahana manao izany dia hametraka ny fandaharan’asa saha sekoly izay ahafahan’ ireo tantsaha manitatra ny fahaizany sy hanomezana azy ireo ny teknika fambolem-bary. Ankoatr’izay dia hametraka ireo tantsaha mpamokatra masomboly voafantina. Ho fanampin’izany dia ho jerena ihany koa ny fomba hamatsiana ireo tantsaha amin’ny alàlan’ny FDA sy ny groupement villageois d’entraide communautaire” izay ahafahan’ireo tantsaha mifampindram-bola ao anatiny.
Fandaharanasa Fianatra : Hanofana ireo tanora any amin’ ny faritra Androy sy Anosy.